काठमाण्डौमा ‘अमेरिकन बाबु मेडइन नेपाल’ चलचित्रको बिशेष प्रर्दशनी – SajhaPana
काठमाण्डौमा ‘अमेरिकन बाबु मेडइन नेपाल’ चलचित्रको बिशेष प्रर्दशनी
साझा पाना २०७५ कात्तिक २० गते ११:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरीकामा निर्मीत नेपाली चलचित्र अमेरीकन बाबु मेड एन नेपालको काठमाडौमा बिशेष प्रर्दशनी भएको छ । राजधानिको कमलपोखीमा अवस्थित सिटी सेन्टरको हलमा उक्त चलचित्रको प्रर्दशनी गरिएको हो । दर्शकहरुको खचाखच हल भरिएको सो चलचित्र हर्ने काठमाडौ क्षेत्र नं ७ का प्रदेश सभासद बसन्त मानन्धर , बिभन्न राजनैतिक दलका नेताहरु , कलाकार एवं पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
चलचित्रमा नेपालीहरुले अमेरिकालाई कसरी लिन्छन ? अमेरिकामा पुगेर नेपालीहरु कत्तिको खुसि छन् ? अमेरिका नेपालीहरुको लागि कस्तो देश हो ? अमेरिकी नेपालीहरु मातृभूमिलाई कसरी सम्झिने गर्छन् ? लगायतका तमाम प्रसंगहरु चलचित्रले दर्शाउन खोजेको छ ।
राजेश गुरुङ निर्माता रहेको चलचित्र ‘अमेरिकन बाबू मेडईन नेपाल’का निर्देशक ईश्वर थापा हुन । चर्चित अभिनेत्री नन्दीता केसी, नायक बाबु बोगटी, स्मृति पोखरेल, प्रियङ्का ऐर, अञ्जली लामा, प्रेवश उप्रेती लगायतको अभिनय रहेको छ ।